Fanolanana sy fifamotorana :: Lehilahy voatondro ho nahabevoka ny zanany vavy, 15 taona • AoRaha
Fantatra fa ny rainy ihany no nahabevoka ny ankizivavy iray, 15 taona. Niharan’ny fanolanana nataon’ny rainy io ankizy tsy ampy taona io ka nitoe-jaza sy teraka. Voasambotry ny polisy teny Ankadifotsy, omaly, ilay raim-pianakaviana, 37 taona voarohirohy. Noentina hatao famotorana izy mialoha ny hitondrana ny raharaha eny amin’ny Fampanoavana.
Nisy fitoriana voarain’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona (PMPM) etsy Tsaralalàna, tamin’ny volana mey 2019, noho ny herisetra ara-nofo nihatra tamina zazavavy iray, 15 taona. Ny rahavavin-drenin’ilay ankizy voaolana no tonga nametraka fitoriana sy nilaza fa ny ray niteraka an’io ankizy io ihany no nanao ny fanolanana.
“Tsy niverina teny amin’ny polisy intsony nanohy ny fitoriana sy ny fanadihadiana ny mpitory satria norahonan’ilay lehilahy voalaza fa mpanolana. Nitoe-jaza kosa tetsy andaniny ilay voaolana. Teraka izy, taty aoriana, ka niverina teny amin’ny polisy nitory sy nitantara ny zavatra nahazo azy”, araka ny tatitra avy amin’ny mpanao famotorana.
Tsy niandry ela ny mpitandro ny filaminana tamin’ny fikarohana sy fisamborana an’ilay raim-pianakaviana.
Mateti-pitranga ny fanolanana sy herisetra ara-nofo mihatra amina ankizy tsy ampy taona ataon’ny olona akaiky azy, toy ny fianakaviany, tahaka ity tranga farany ity. Vao tsy ela ihany koa no nisy lehilahy iray nogadraina noho ny fanaovana fihetsika mamoafady tamin’ny zaza, enin-taona, izay zana-badiny ihany.
Fanenjehana olona ambony :: Miandry ny fanapahan-kevitry ny Antenimierampirenena sisa ny HCJ
Herisetra tamim-behivavy :: Any am-ponja vonjimaika ilay rain-janak’i Tahisy